नोट गन्दै गर्दा नगर्नुहोस् यी काम, माता लक्ष्मी रिसाउनुहुन्छ ! – Annapurna Post News
June 13, 2022 sujaLeaveaComment on नोट गन्दै गर्दा नगर्नुहोस् यी काम, माता लक्ष्मी रिसाउनुहुन्छ !
काठमाडौं । भगवान विष्णुकी पत्नी लक्ष्मी देवीलाई धनकी देवी मानिन्छ । पैसा बिना केहि सम्भव छैन। जहाँ पैसा हुन्छ त्यहाँ मन हुन्छ ।लक्ष्मीको पूजा गर्नाले ऐश्वर्य र वैभव प्राप्त हुने जनाइएको छ । पैसा भएकालाई समाजमा सम्मान गरिन्छ ।
भनिन्छ, जुन घरमा माता लक्ष्मीको बास हुन्छ, त्यो घरमा गरिब कहिल्यै आउँदैन। लक्ष्मीको रिस उठ्यो भने गरिबीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। परिवारमा गरिबीको छायाँ नपरोस् भनेर हरेक व्यक्ति प्रयास गर्छ ।
तर यस्तो भयो भने के गल्ती गर्‍यौं, त्यो बुझ्दैन, जसको कारणले गरिबीले खुट्टा हाम्रै ढोकामा राखेको छ । मिहिनेत गरे पनि पैसा आउँदैन र आएपछि टिक्दैन, खर्च हुन्छ ।
यी सबैको पछाडि कुनै ठुलो कारण छैन, यो मात्र हो कि हामी दिनभरि पैसाले केहि काम गरिरहन्छौं, जसको बारेमा हामी आफैंलाई थाहा हुँदैन र लक्ष्मीजी क्रोधित भएर त्यहाँबाट जान्छिन्।
पर्समा नोट र पैसाको साथ खानेकुरा कहिल्यै नराख्नुहोस्। यसो गर्दा धनको अपमान हुन्छ।जब तपाइँ कसैलाई पैसा वा पैसा दिनुहुन्छ, यसलाई कहिल्यै नफाल्नुहोस्। यसो गर्नु भनेको लक्ष्मी जी को अपमान गर्नु जस्तै हो, त्यसैले सधैं सहजै हातमा पैसा वा नोट दिनुहोस्।धेरैजसो मानिसहरूले आफ्नो हातमा बारम्बार थुकेर नोट गन्छन्, जुन सही हो।
यसो गर्दा माता लक्ष्मीको अपमान हुन्छ। तपाईंले नोटहरू गणना गर्दा पानी वा पाउडर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।पैसा टाउकोमा राखेर वा ओछ्यानको छेउमा कहिल्यै नसुत्नुहोस्। यसो गर्नु लक्ष्मीको अपमान मानिन्छ। लक्ष्मीको कोरी वा गोमती चक्र सहितको पैसा सधैं सफा ठाउँ, अलमारी वा भोल्टमा राख्नुहोस्।हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार धनमा लक्ष्मीको वास हुन्छ, त्यसैले भुइँमा खसेको धनलाई उठाउनुअघि निधारमा लगाउनुपर्छ ।
यी ६ राशिका हुन्छन् निकै जिद्दी, कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन !